Amahlebezi abafileyo, inoveli eshaqisayo ka-Enrique Laso | Izincwadi Zamanje
Namuhla e-Actualidad Literatura sethula ukubuyekezwa kwenye yezincwadi ezinhle kakhulu ezibhalwe ngu-Enrique Laso, "Amahemuhemu abafileyo." Inoveli eqanjiwe yesayensi lapho uLaso ekwazi khona ukuxhumeka kusuka ekhasini lokuqala kuya ekugcineni.
Noma yimuphi umuntu othanda izinganekwane zesayensi uzobe ezwile ngeNecronomicon, incwadi eyenziwe nguLovecraft, noma mhlawumbe bekungeyona into elula?
USebastián Madrigal uyintatheli osezingeni eliphansi kakhulu emsebenzini wakhe wobungcweti. Izikweletu zimcindezela kakhulu futhi uqala ukwesaba ikusasa lakhe lezezimali.
Ngemuva kwendatshana ekhuluma nge-Necronomicon intatheli eyishicilele ngaphandle kokunakekelwa okukhulu, usozigidi ome njengeqanda uxhumana naye ukuze amnikeze umsebenzi, isizumbulu semali ukuze athole ikhophi yokuqala.
UMadrigal, naphezu kwendatshana yakhe akazi lutho ngale ncwadi, uyavuma ukuthengiselana. Ngosizo lomngani wakhe uCarlos kanye noClaudia oyindida, uzoqala ukuzijabulisa ngemiphumela ebalulekile.
Yize isakhiwo sencwadi singahlangene naso, ngokuqinisekile sisikhumbuza ngandlela thile ngencwadi edumile ethi "El club Dumas", ngu-Arturo Pérez-Reverte omkhulu; ibhuku elethwe esikrinini esikhulu esinegama elithi "Isango Lesishiyagalolunye" eliqondiswe nguRoman Polanski.
Njengoba sixoxile, inoveli inezinhlamvu ezishintshayo ezifana nendaba kaPérez-Reverte, yize uLaso enesitayela sakhe futhi njengoba indaba iqhubeka sikhohlwa ukufana kwalezi zindaba zombili.
"Amahemuhemu abafileyo" yinoveli emnandi, inhlanganisela yefantasy nozungu. Izinhlamvu zakhiwe kahle kakhulu. Abalungile abalungile, noma ababi ababi kangako. Bonke banomlando wabo futhi baxhumeke kahle. Ezikhathini eziningi kuyenzeka ukuthi, kunoveli kube nabalingiswa abasele, lokhu akunjalo.
Elinye iphuzu esivuna ushintsho esikhathini sokulandiswa kwendaba. Ekuqaleni kungadideka kancane, kepha empeleni kuyinto ekwazi ukuheha umfundi kakhudlwana.
Incwadi enconywe kakhulu, esheshayo ukufunda (ngoba ngeke ufune ukuyibeka phansi) futhi enesiphetho esihle.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » Amahlebezi abafileyo, inoveli eshaqisayo ka-Enrique Laso
Izihloko zezincwadi ezi-5 ezithengiswa kakhulu ezingezona eziqanjiwe